Ulandela njani zonke iintlobo zamashishini kwiimephu zikaGoogle | I-Androidsis
Ulandela njani amashishini kwiimephu zikaGoogle
Iimaphu zikaGoogle ziye zaba sisicelo esibalulekileyo yezigidi zabasebenzisi be-Android. Kunyaka ophelileyo uphuculo oluninzi lwenziwe kuyo. Uninzi lolu phuculo lujolise kwishishini, okanye kunxibelelwano namashishini, indlela yokuthumela imiyalezo. Kancinci kancinci imisebenzi emitsha ifika kwisicelo, eyilelwe ukuba isetyenziswe ngcono kule meko. Ukusukela ngoku kunokwenzeka ukuqhubeka neshishini.
Enkosi ngalo msebenzi mtsha kwiimephu zikaGoogle sinokulandela ishishini elinomdla kuthi. Ukusuka ezivenkileni ukuya kwiivenkile zokutyela. Ngale ndlela, ngalo msebenzi, sinokuhlala sinolwazi malunga naziphi na iindaba malunga neshishini elichaziweyo okanye ubukho bezithembiso kunye nokunyuselwa okunomdla kuthi.
Eli nqaku lilandelayo lishishini elitsha kwi-app. Kodwa yinto enokuba namathuba amaninzi. Into elungileyo kukuba sinokulandela naliphi na ishishini elinomdla kuthi kwiimephu zikaGoogle. Yintoni ekufuneka siyenzile ukulandela ishishini kwi-app? Sichaza amanyathelo, alula kakhulu, ngezantsi.
1 Landela amashishini kwiimephu zikaGoogle
2 Bona izibonelelo kunye neendaba
Landela amashishini kwiimephu zikaGoogle
Ngumsebenzi oya kusivumela Fumana okungakumbi kuyo kwi-app eyaziwayo ye-Android. Into ekufuneka siyenzile kukukhangela ishishini elichaziweyo kwiiMaphu zikaGoogle. Xa sisenza njalo, sihlala sifumana a ikhadi loshishino elisezantsi kwiscreen. Kuya kufuneka sicofe kule thebhu, ukuze ibe nkulu kwaye ihlale kwiscreen sonke.
Okwangoku, ngezantsi nje kwegama leshishini, uyabona kukho iqhosha elithi landela. Eli liqhosha ekufuneka sicofe kulo, ukuze sikwazi ukulandela ishishini elichaziweyo kwisicelo. Iimaphu zikaGoogle zisivumela ukuba silandele inkampani ngeendlela ezimbini. Singayenza esidlangalaleni, evumela inkampani ukuba ijonge iprofayile yethu okanye ngasese. Kuxhomekeke kumsebenzisi ngamnye ukukhetha indlela.
Ngale ndlela, Sele silandela eli shishini kwiimephu zikaGoogle. Oku kuyakuvumela ukuba sihlale sisazi malunga neendaba ezinokwenzeka malunga neshishini. Kuba ngale ndlela, ukuba kukho unyuselo okanye izithembiso zomdla, sinokuhlala sinolwazi ngazo. Le yinto enokwaziwa ngendlela elula. Ke ngoko, ukuba ufuna ukubanakho ukuxhamla kwizibonelelo, kuya kufuneka ubonane nelinye icandelo kwisicelo se-Android.
Bona izibonelelo kunye neendaba
Nje ukuba sililandele ishishini kwi-app, kufuneka siye kwiscreen sayo sasekhaya. Kule skrini, sijonga ezantsi kwayo. Apho sifumana iindlela ezintathu. Owesithathu, lowo uphuma uya ngasekunene, Ibizelwe wena. Olu lukhetho olunomdla kuthi kule meko. Ke ngoko, cofa kuyo.
Eli candelo libonisa unyuselo, unikelo okanye iindaba ezinokuba nomdla kuthi. Ngesi sizathu, amashishini esiwalandelayo okanye akule ndawo ayaboniswa. Ke ukuba kukho nasiphi na isenzo esiqhubekayo ngale mihla, sinokubabona. Into enokusivumela ukuba siyonge ekuthengweni kweemveliso ezithile, okanye xa usiya kudla isidlo sangokuhlwa kwindawo ethile. Kungayinto enomdla ukutyelela eli candelo kwiimephu zikaGoogle amaxesha ngamaxesha kwaye ubone ukuba ikhona into enomdla.
Kwelinye icala, ukuba sifuna ukubanolawulo lweendawo esizilandelayo kwiimephu zikaGoogle kwi-Android, oku kunokwenzeka kwimenyu esecaleni yesicelo. Kwiiveki ezidlulileyo le menyu yokukhangela ihlaziyiwe, Ngoyilo olulula oluya kusivumela ukuba sihambe ngcono kwisicelo. Kwangokunjalo kukho icandelo elibizwa ngokuba ziisayithi zakho, eyokuqala ukuphuma. Kuyo sinokubona onke amashishini esiwalandelayo kwisicelo ngendlela emnandi kakhulu. Kananjalo ukuba sifuna ukuyeka ukulandela enye singayenza kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ulandela njani amashishini kwiimephu zikaGoogle
I-Spotify iya kuqala ukuvimba iiakhawunti zabasebenzisi abasebenzisa iibhloksi zentengiso
Iiapps ze-Android ezinokonga idatha